အိမ်မှာပန်းပုလုပ်ရမယ်။ - Mibond စက်ပစ္စည်း
နေအိမ် / သတင်း / ဘလော့ / အိမ်မှာပန်းပုလုပ်ရမယ်။
views:200 Author:ဆိုက်ကို Editor ကို အချိန် Publish: 2021-06-19 မူလ:ဆိုက်ကို
ပန်းပုအမျိုးအစားများစွာရှိပါသည်, သို့သော်၎င်းကိုနှစ်မျိုးခွဲခြားနိုင်သည် technique ကိုအရသိရသည်။ ပထမ ဦး စွာ Superimposed Superimposed ပန်းပုရုပ်ရိုးပုံသဏ္ာန်ပုံစံ (မြေဆီလွှာ, ဖယောင်း, ကတ်ထူပြား, ကွန်ကရစ်ပျော့ဖတ်, ဒုတိယအချက်မှာနုတ်ခြင်းြင်ြငင်းပန်းပု ပုံစံ (ကျောက်, သစ်သား, ရေခဲစသဖြင့်) ပုံစံကိုဖြတ်တောက်ခြင်းဖြင့်လုံးဝဖန်တီးထားသည်။ ပန်းပုကိရိယာများတွင်ပန်းပုကိရိယာများပါဝင်သည်လျှပ်စစ်ကြိတ်စက်များ,rotary ပွန်းစားကိရိယာအစုံ,တူးရန်စက်စသည်တို့ကိုစသည်တို့
(1) ဆွဲပါSa ketchSလက်ရ။
အကယ်. ပန်းပုကိုအခြေစိုက်စခန်းပေါ်တွင်တင်ထားပါက, အခြေစိုက်စခန်းကိုသစ်သား, သတ္တု, ရွှံ့စေး, ကျောက်သို့မဟုတ်အခြားပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
(3) set upSကေျာက်တင်သည်။
ကွင်းကွင်းသည်ပန်းပု၏အရိုးစုနှင့်တူသည်, ပန်းပုတစ်လုံးလုံးကိုထောက်ပံ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ပုံတူ၏လက်မောင်းသို့မဟုတ်ခြေထောက်သည်အဓိကကိုယ်ထည်မှကျဆင်းသွားပြီးအရိုးကျိုးသည်။ ဤအချိန်တွင်ကွင်းခတ်ရန်လိုအပ်သည်။
(4) ဖြည့်ပါC။ ။
၎င်းကိုပန်းပုပစ္စည်းမှခွဲခြားရန်ကွဲပြားသောပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်ရေွးထားနံရံများပြုလုပ်ရန် ED ။ ပန်းပုကိုပျော့ပျောင်းသောအိုးဖြင့်ပြုလုပ်သောအခါ၎င်းသည်အထူးသဖြင့်ဖြစ်သည်။ နံရံသည်ပစ္စည်းကုန်ကျစရိတ်နှင့်ပန်းပုကိုယ်အလေးချိန်ကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
(5) ရွှေ့ပါCဂုဏ်ပြုCဝင်ပါGကနေရက်စက်မှုGတစ်ခုလုံးSရန် hapeDetails ။
Fဖျားနာပန်းပုပစ္စည်းများfCentral Shoulder (Muscy Group) သည်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ (ကြွက်သားအုပ်စုငယ်)နှင့် ကြီးမားသောအသေးစားအသေးစိတ်အချက်အလက်များမှအသေးစိတ်အချက်အလက်များ။ လိုအပ်သောအဖြစ်ဖြည့်ပစ္စည်းတိုးမြှင့်သို့မဟုတ်လျှော့ချ။
(6) ထည့်ပါDetails ။
ခန္ဓာကိုယ်ပုံသဏ္ base ာန်အခြေခံအားဖြင့်ပြီးစီးပြီးနောက်၎င်းသည်ရောနှောခြင်းနှင့်ထွင်းခြင်းစတင်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့် အသေးစားအိတ်ဆောင်လျှပ်စစ်ကြိတ်သမားပုံတူ၏ဆံပင်, မျက်စိ, ကြွက်သားခါးဆစ်ကဲ့သို့။
လိုအပ်ပါကပန်းပုတွင်နောက်ဆုံးခြေလှမ်းသည် texture ကိုထည့်ရန်ဖြစ်သည်။ ဤသည်ပန်းပု၏စစ်မှန်မှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်ပါတယ်။
Tသူထုထည်ကိုခြောက်သွေ့စေဖို့ဒါမှမဟုတ်လေကိုခြောက်သွေ့ဖို့လိုတယ်dအသုံးပြုသောပစ္စည်းများအပေါ် epending ။ ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ၏ညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာရမည်။
အဆိုပါပန်းပုပါလျှင်လိုအပ်ချက်များသို့ဖြစ်အရောင်edဆေးသုတ်ဆေးedပန်းပုသည်လုံးဝခြောက်သွေ့သည်အထိစောင့်ပါ, အထူးခြယ်ပစ္စည်းဖြစ်နိုင်သည်စာချုပ်edလေှျာက်ထားသော သို့ပစ္စည်းအသုံးပြုသောပစ္စည်း။ ဥပမာအားဖြင့်, ကမော်ဒယ်ကြွေကြာပါသည်ရေးဆဲွခြင်းပျော့ပျောင်းသောအိုးပေါ်တွင်ဆေးသုတ်ရန်။
အပေြာင်းလေှျာက်လွှာရောနှောထားသောပစ္စည်းများသည်ပန်းပုကိုစိတ်0င်စားစရာများစွာကိုတိုးပွားစေပြီးပန်းပု၏သရုပ်မှန်ကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်သို့မဟုတ်စိတ်ဝင်စားဖွယ်အရောင်များနှင့်ထိတွေ့မှုကိုထည့်သွင်းနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်,ဖြစ်အသုံးပြုdထုပန်းပု၏။
(1) လုပ်ပါSဉပဒေလှသောအရိပ်PRototype ။
Qပန်းပု၏ရှေ့ပြေးပုံစံကိုယုတ်နှင့်ရွှံ့စေး, ဖယောင်းသို့မဟုတ်အခြားပစ္စည်းများ။ ၎င်းကိုထွင်းထုထားသောကျောက်တုံးများသို့မဟုတ်အခြားပစ္စည်းများတိုင်းတာရန်အတွက်အခြေခံအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။
(2) ထုBအလွန်Shapes ။
The Prototype ၏တိုင်းတာခြင်း, ဖြတ်တောက်ခြင်းအတွက်ကျောက်တုံးသို့မဟုတ်သစ်သားပေါ်တွင်မှတ်သားထားပါ။ ဥပမာအားဖြင့်, ပန်းပုသည် 14 စင်တီမီတာထက်မပိုပါက 15 စင်တီမီတာအထက်ရှိအစိတ်အပိုင်းများကိုဖြတ်နိုင်သည်ကြိတ်ခွဲစက်။ အခန်းတစ်ခန်းမှထွက်ခွာသည့်ရဝုဏ်တွင်ပန်းပု၏အခြေခံပုံသဏ္ဌာန်ကိုထုတ်ယူပါနှင့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပန်းပုရုပ်ကိရိယာများ.
CSculpture ရှေ့ပြေးပုံစံအရွယ်အစားကို alculate လုပ်ပြီးကျောက်တုံးသို့မဟုတ်သစ်သားပေါ်တွင်နေရာချပါနှင့်တစ် ဦး ညွှန်ပြစက်သို့မဟုတ်အခြားတိုင်းတာကိရိယာများ။
(4) ထုDetails ။
GRedundant အစိတ်အပိုင်းများကိုအလွန်မလိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းများနှင့်ကျန်ရှိသောအမှတ်အသားများကိုပျောက်ကွယ်သွားသည်ညွှန်ပြခြင်းစက်ယန္တရားနှင့် DIY ပန်းပုကိရိယာများပန်းပုပစ္စည်းများအတွက်သင့်တော်သည်.
လျှပ်စစ်ကြိတ်စက်များ rotary ပွန်းစားကိရိယာအစုံ အသေးစားအိတ်ဆောင်လျှပ်စစ်ကြိတ်သမား ကြိတ်ခွဲစက် တူးရန်စက် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပန်းပုရုပ်ကိရိယာများ DIY ပန်းပုကိရိယာများ ပါဝါ rotary grinder tool ကို အိတ်ဆောင်ကြိတ်စက် Mini Pen Grinder